ဝိညာဉျတျောအဆငျ့စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုတရုတ် | Jiabei
Diode များအတွက် Aspheric Collimator Glass ကိုမှန်ဘီလူး
ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏အဆငျ့ပြွန်ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်ပြွန်များ၏အတွင်းစိတ်မြို့ရိုးကိုအဖြစ်များတတ်သည်၏အခြို့သောအချင်းဝက်နဲ့ကွေးမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြွန်အရည်ပါရှိသည်။ အဆင့်စောင်းဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, အဆင့်အနေအထားဆုံးဖြတ်ရန်အဆင့်၏အဆုံးအဆင့်ပြွန်ပြောင်းရွှေ့အတွက်သှ။ အဆိုပါပိုကြီးတဲ့စိတျဓာတျအဆငျ့များ၏အတွင်းစိတ်ထရံအဖြစ်များတတ်သည်၏အချင်းဝက်သည်ပိုမိုမြင့်မားဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အဖြစ်များတတ်သည်၏သေးငယ်သည့်အချင်းဝက်, အောက်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်။ ထို့ကြောင့်, ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏အဖြစ်များတတ်သည်၏အချင်းဝက်ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဝိညာဉျတျောအဆငျ့အဓိကအားဖြင့်ပြားချပ်ချပ်, ဖြောင့်, Vertical နှင့်အမျိုးမျိုးသောစက်ကိရိယာများနှင့် workpieces ၏ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း၏အလျားလိုက်အနေအထားစစ်ဆေးခြင်းအသုံးပြုသည်။ ဒေါင်လိုက်တိုင်းအထူးသဖြင့်သောအခါ, သံလိုက်အဆင့်အထိအလုပ်သမားပြင်းထန်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အဆင့်အထိလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်တိုင်းတာခြင်းအမှားရှောင်ရာကို manual ထောက်ခံမှု, မပါဘဲဒေါင်လိုက်အလုပ်လုပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏အောက်ခြေနှင့်ဘေးထွက် 2000mm တစ်အရှည်နှင့်အတူ Right-angled အဆောက်အဦများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိကျမှန်ကန်မှု (0.02-0.025) မီလီမီတာ / မီတာယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူကိုအထူးလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်ဆိုပါကတစ်ဦးချင်းစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ သုညမှ 1. လွယ်ကူ: ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏ zeroing ဖွဲ့စည်းပုံမှာသမရိုးကျဖွဲ့စည်းပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက် 2. သည်သုညအနေအထားလွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှုသည်မဟုတ်။5ကြိမ်ပုံ 1. core ကိုဝင်ရိုးပတ်လည်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားအဆင့်ကို Rotate ၏တဲ့အခါမှာ V-ပုံ groove အောက်ခြေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြောင်းရွှေ့သှလျှင်, သင်ဝက်အူ 2. ဤအကြောင်းအရာသည်ချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်စက်ရုံတွင်မှာချိန်ညှိထားပြီး နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝိညာဉျတျောအဆငျ့၏ဖွဲ့စည်းပုံဟာခွဲခြားသည်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသည်။ frame ကိုပုံစံဝိညာဉျတျောအဆငျ့ယေဘုယျအားဖြင့်ဝိညာဉ်အဆင့်ကိုအဓိကကိုယ်ထည်တစ်ခုအလျားလိုက်အဆင့်တစ်ခု adiabatic လက်ကိုင်တစ်ခုအဓိကအဆင့်ကိုတစ်ဦးအဖုံးပန်းကန်နှင့်သုညညှိနှိုင်းမှု device ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အုပျအဆငျ့ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးအဆင့်ကိုယျခန်ဓာကိုတစ်ဦးအဖုံးပန်းကန်တစ်ဦးအဓိကအဆင့်နှင့်တစ်ဦးသုညညှိနှိုင်းမှု device ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
ဝိညာဉျတျောအဆငျ့ element တွေကိုတိုင်းတာနဲ့ဖတ်နေဘို့တိုင်းစရာ tool အဖြစ်တစ်ဦးဝိညာဉျတျောအဆငျ့အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအဆင့်တွင်အလုံပိတ်ဖန်ပြွန်ဖြစ်ပြီး, အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်၏ longitudinal အပိုင်းအဖြစ်များတတ်သည်၏အခြို့သောအချင်းဝက်နဲ့မြို့ပတ်ရထားကို arc မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်၏ဖန်ပြွန်ထိုကဲ့သို့သောအရက်, အီနှင့်၎င်း၏အရောအနှောအဖြစ်အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ကိန်းနှင့်အရည်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ အရည်မပါဘဲအစိတ်အပိုင်းကိုများသောအားဖြင့်အဆင့်ပူဖောင်း 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဖန်ခွက်ကိုပြွန်များ၏အတွင်းစိတ်မျက်နှာပြင်၏ longitudinal အပိုင်းနှင့်ကျောင်းဆင်းပွဲတန်ဖိုးအဖြစ်များတတ်သည်၏အချင်းဝက်အကြားတစ်ဦးအခြို့သောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါသည်။ ဒီကြားဆက်ဆံရေးအရ, တိုင်းတာလေယာဉ်၏အကွံကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Post ကိုအချိန်: ဇန်နဝါရီ-09-2020
အမှတ်တရကွင်းစ , Receiver , 360 Rotary လေဆာအဆင့်အစိမ်းရောင် Beam ကို , စုစုပေါင်းဘူတာ , လေဆာအလင်း , tripod ,